Farqiga u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha waxbarta | Somaliska
Cilmi baaris ay sameysay dowlada Sweden ayaa lagu soo bandhigay farqi u dhexeeya wiilasha iyo gabdha wax barta ayadoo la sheegay in gabdhaha ay aad uga fiicanyihiin waxbarashada guud halka wiilashu ay ku fiican yihiin Ciyaaraha iyo Caafimaadka. Gabdhaha ayaa la sheegay in ay ku firfircoon yihiin waxbarashada ayagoo waqti badan siiya kana fikira. Balse waxay warbixintu soo bandhigtay in ay gabdhahu ku liitaan xaga dareenka maskaxda ayagoo dhibaato ka heysato fikirka. Wiilasha ayaa la sheegay in markii ay dareenka maskaxdoodu uusan fiicneyn si dhaqsi ah lagu dareemi karo balse ay ku adagtahay macalimiinta in ay fahmaan gabdhaha. Cilmi baarista ayaa ku talisay in iskuulada ay si wanaagsan u balaariyaan fahanka ardada iyo waxbarashadooda.
Farqiga u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha waxbarta
Cilmi baaris ay sameysay dowlada Sweden ayaa lagu soo bandhigay farqi u dhexeeya wiilasha iyo gabdha wax barta ayadoo la sheegay in gabdhaha ay aad uga fiicanyihiin waxbarashada guud halka wiilashu ay ku fiican yihiin Ciyaaraha iyo Caafimaadka.
Gabdhaha ayaa la sheegay in ay ku firfircoon yihiin waxbarashada ayagoo waqti badan siiya kana fikira. Balse waxay warbixintu soo bandhigtay in ay gabdhahu ku liitaan xaga dareenka maskaxda ayagoo dhibaato ka heysato fikirka.
Wiilasha ayaa la sheegay in markii ay dareenka maskaxdoodu uusan fiicneyn si dhaqsi ah lagu dareemi karo balse ay ku adagtahay macalimiinta in ay fahmaan gabdhaha.
Cilmi baarista ayaa ku talisay in iskuulada ay si wanaagsan u balaariyaan fahanka ardada iyo waxbarashadooda.